အနုပညာကဏ္ဍ – Thutastar
ရှက်တတ်ရင်နှုတ်ထွက်သင့်တယ် ဆိုတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ နေခန့်မင်းသစ်
Comments Off on ရှက်တတ်ရင်နှုတ်ထွက်သင့်တယ် ဆိုတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ နေခန့်မင်းသစ်
ရှက်တတ်ရင်နှုတ်ထွက်သင့်တယ်’ ဆိုတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ နေခန့်မင်းသစ် Myanmar Idol ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု၊ အားပေးမှုတွေကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ယခုကျင်းပလျက်ရှိတဲ့ Season3ရဲ့ ပြိုင်ပွဲကတော့ ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေ ပြင်းထန်နေပြီး ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲရဲ့ ရလဒ်ကြေညာပွဲမှာ ပြိုင်ပွဲဝင် နီလန်းနဲ့ ဇော်ကြီးတို့က ပြိုင်ပွဲကနေ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲမှာ ဆက်လက်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နေခန့်မင်းသစ်ကတော့ “ရှက်တက်ရင် နှုတ်ထွက်သင့်တယ်” ဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေကို ရရှိနေပါတယ်။ ယခင်တစ်ပတ်က နေခန့်မင်းသစ်ဟာ ပွဲစဉ်တစ်လျှောက်လုံး ဒိုင်လူကြီးတွေ တစ်ခါသာ အသုံးပြုခွင့်ရှိတဲ့ Save လုပ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး အဆိုပါ ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ရက်သတ္တပတ်က မည်သူမျှ ပြိုင်ပွဲက ထွက်ခွာခဲ့ရခြင်း မရှိခဲ့တဲ့အတွက်
online မှာ ပြန့်နေတဲ့ ပုံတွေက ပရိသတ် ထင်ထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲဆိုတဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင် (ရုပ်သံ)
Comments Off on online မှာ ပြန့်နေတဲ့ ပုံတွေက ပရိသတ် ထင်ထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲဆိုတဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင် (ရုပ်သံ)
ပရိသတ်တွေ သိချင်နေကြတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ ပုံတွေကိစ္စကို ဥက္ကာမင်းမောင်က ရုပ်သံနှင့်တကွ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်.. အဆိုပါပုံများဟာ ပရိသတ်တွေ ထင်သလို ဟုတ်မှန်ကြောင်း.. လိင်တူခြင်း အိမ်ထောင်ကျခဲ့ဖူးကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ် ” ပုံတွေကိစ္စကို စာနယ်ဇင်းတွေလဲ ဝိုင်းမေးကြတယ်.. စာတွေလဲ တပုံကြီး ရောက်တယ်.. တမိသားစုလုံးဆီလဲ လာမေးကြတယ်.. ညနေကျမှ ဗီဒီယို နဲ့ဖြစ်ဖြစ် စာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တင်ပါမယ်.. မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ မနက်ပေါ့.. ok? ” ဆိုပီး ဖေ့ဘုတ်မှာ စာတင်ခဲ့ပီး ညပိုင်းမှာ video ဖိုင် တင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ” Online ပေါ်က ပုံတွေကိစ္စ. အားလုံး သိချင်နေကြတဲ့ တိကျတဲ့ အဖြေတစ်ခု… I am who I am, I love
မိသားစုကို သွားတွေ့တာနှင်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ကျော်ဇင်ထွဋ်…
Comments Off on မိသားစုကို သွားတွေ့တာနှင်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ကျော်ဇင်ထွဋ်…
သရုပ်ဆောင် ကျော်ဇင်ထွဋ်တစ်ယောက်ကတော့ သူ့ချစ်တဲ့ မိသားစုလေးကို သွားတွေ့တာမှာ တွေ့ခွင့်မရပဲ နှင်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တည်းက မိသားစုလေးနဲ့ ခွဲလိုက်ရတယ်လို့ ဖေ့ဘုတ်မှာ သတင်းတွေပြန့်ခဲ့ပါတယ်။ ကျော်ဇင်ထွဋ်ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ဘာသာခြားဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လောလောဆယ် ကျော်ဇင်ထွဋ်က သမီးလေးတွေနဲ့ ဇနီးကို မထောက်ပံ့နိုင်တာကြောင့် လမ်းခွဲလိုက်ရပုံပါပဲ။ ခုတော့ မိသားစုလေးနဲ့ပြန်နေနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Credit to PannPwint ================ သရုပျဆောငျ ကြျောဇငျထှဋျတဈယောကျကတော့ သူ့ခဈြတဲ့ မိသားစုလေးကို သှားတှတေ့ာမှာ တှခှေ့ငျ့မရပဲ နှငျထုတျခံလိုကျရတယျလို့ သိရပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့အပတျတညျးက မိသားစုလေးနဲ့ ခှဲလိုကျရတယျလို့ ဖဘေု့တျမှာ သတငျးတှပွေနျ့ခဲ့ပါတယျ။ ကြျောဇငျထှဋျရဲ့ ဇနီးဖွဈသူ ဘာသာခွားဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ လောလောဆယျ ကြျောဇငျထှဋျက သမီးလေးတှနေဲ့ ဇနီးကို မထောကျပံ့နိုငျတာကွောငျ့ လမျးခှဲလိုကျရပုံပါပဲ။
သင်ဇာ့ရဲ့ ကောမန့်အောက်မှာ ပရိတ်သတ်တွေနားလည်မှုလွဲစေမယ့် ကော့မန်းရေးခဲ့တဲ့ အောင်ရဲလင်း
Comments Off on သင်ဇာ့ရဲ့ ကောမန့်အောက်မှာ ပရိတ်သတ်တွေနားလည်မှုလွဲစေမယ့် ကော့မန်းရေးခဲ့တဲ့ အောင်ရဲလင်း
နိူင်ငံကျော်အနုပညာရှင်နှစ်ဦးဖြစ်ကြတဲ့ အောင်ရဲလင်းနဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်တို့နှစ်ဦးကတော့ သရုပ်ဆောင်းမှာထူးချွန်တာကြောင့် ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အပြည့်အဝရရှိထားကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားတွေတော်တော်များများမှာ အတူတွဲသရုပ်ဆောင်လေ့ရှိတဲ့ သူတို့နှစ်ဦးကတော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မောင်နှမအရင်းတွေလို ခင်မင်ကြတာပါ။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ ဒီနေ့လေးမှာ ကျရောက်တဲ့ အောင်ရဲလင်းရဲ့ အသက်၃၀ပြည့်မွေးနေ့အတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာ့ရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးရဲ့အောက်မှာတော့ အောင်ရဲလင်းက မထိတထိလေးနဲ့ ကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ဆိုခဲ့တာပါ။ အောင်ရဲလင်းကတော့ “peaceful my full of 30th birthday (19.6.88 ) under the embrace of..” Lord Buddha ” n all my thanks goes to the ones who wish for me….:)) I wish
သီချင်းဆိုနေရင်း စင်ပေါ်မှ အရှိန်လွန် ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် နေထက်လင်း VIDEO
Comments Off on သီချင်းဆိုနေရင်း စင်ပေါ်မှ အရှိန်လွန် ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် နေထက်လင်း VIDEO
ရုပ်ရှင်နဲ့ဗွီဒီယိုသရုပ်ဆောင် အက်ရှင်မင်းသားနေထက်လင်းဟာဆိုရင် ပီပြင်ပြောင်မြောက်တဲ့ သူ့ရဲ့အက်ရှင်ပြကွက်တွေနဲ့ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဝါရင့်မင်းသားတစ်ယောက်ပါ ။ နေထက်လင်းသရုပ်ဆောင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားပေါက်များစွာရှိခဲ့တာကြောင့်လည်း ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားသူပါ။ နေထက်လင်းကနှစ်အတော်ကြာပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတခါမှာတော့နေထက်လင်းကပွဲတစ်ခုမှာသီချင်းဆိုရင်းစင်ပေါ်မှပြုတ်ကျခဲ့တဲ့videoလေးတစ်ခုကပရိသတ်တွေကြားမှာနာမည်ကြီးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စင်ပေါ်မှာသီချင်းဆိုနေတဲ့နေထက်လင်းက အရှိန်လွန် ပြီးပြုတ်ကျခဲ့တာလို့ပရိသတ်တချို့ရဲ့ပြောဆိုထားတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ နေထက်လင်းက သရုပ်ဆောင်ကောင်းသလို အဆိုကောင်းသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နေထက်လင်းရဲ့ ပုံရိပ်တချို့သရုပ်ဆောင်ပီပြင်လှတဲ့မင်းသား ကျရာဇာတ်ရုပ်သရုပ်ဆောင်နိုင်သူခုချိန်ထိသူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရှိနေဆဲပါ ရုပ်ရှင်နဲ့ဗွီဒီယိုသရုပ်ဆောင် နေထက်လင်းက သီချင်းဆိုရင်း စင်ပေါ်မှပြုတ်ကျခဲ့တဲ့videoကို ပရိသတ်တွေတွေ့မြင်ရပြီးလောက်ပြီထင်ပါတယ်။စင်ပဲမခိုင်လို့လားဒါမှမဟုတ်သီချင်းဆိုရင်းအရှိန်ပဲလွန်သွားသလားဆိုတာကတော့….။ သီချင်းဆိုရင်း စင်ပေါ်မှပြုတ်ကျခဲ့တဲ့နေထက်လင်း VIDEO Credit;momolay ================ ရုပျရှငျနဲ့ဗှီဒီယိုသရုပျဆောငျ အကျရှငျမငျးသားနထေကျလငျးဟာဆိုရငျ ပီပွငျပွောငျမွောကျတဲ့ သူ့ရဲ့အကျရှငျပွကှကျတှနေဲ့ကရြာဇာတျရုပျကို ပီပီပွငျပွငျသရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ဝါရငျ့မငျးသားတဈယောကျပါ ။ နထေကျလငျးသရုပျဆောငျရိုကျကူးခဲ့တဲ့ ဇာတျကားပေါကျမြားစှာရှိခဲ့တာကွောငျ့လညျး ပရိသတျအခိုငျအမာရရှိထားသူပါ။ နထေကျလငျးကနှဈအတျောကွာပရိသတျတှနေဲ့အဆကျအသှယျပွတျနခေဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီတခါမှာတော့နထေကျလငျးကပှဲတဈခုမှာသီခငျြးဆိုရငျးစငျပျေါမှပွုတျကခြဲ့တဲ့videoလေးတဈခုကပရိသတျတှကွေားမှာနာမညျကွီးနတောပဲဖွဈပါတယျ။ စငျပျေါမှာသီခငျြးဆိုနတေဲ့နထေကျလငျးက အရှိနျလှနျ ပွီးပွုတျကခြဲ့တာလို့ပရိသတျတခြို့ရဲ့ပွောဆိုထားတာတှလေညျးတှရေ့ပါတယျ။ နထေကျလငျးက သရုပျဆောငျကောငျးသလို အဆိုကောငျးသူတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။ နထေကျလငျးရဲ့ ပုံရိပျတခြို့ သရုပျဆောငျပီပွငျလှတဲ့မငျးသား ကရြာဇာတျရုပျသရုပျဆောငျနိုငျသူခုခြိနျထိသူ့ကိုခဈြတဲ့ပရိသတျတှရှေိနဆေဲပါ ရုပျရှငျနဲ့ဗှီဒီယိုသရုပျဆောငျ နထေကျလငျးက
ဟာသသရုပ်ဆောင် ဦးမန်းဝင်းကို ဆေးဖိုးငွေအချို့ ထောက်ပံ့လိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
Comments Off on ဟာသသရုပ်ဆောင် ဦးမန်းဝင်းကို ဆေးဖိုးငွေအချို့ ထောက်ပံ့လိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော်တစ်ယောက်ကတော့ ဟာသသရုပ်ဆောင် ဦးမန်းဝင်းကို ဆေးဖိုးငွေအချို့ သွားရောက် ထောက်ပံ့လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ဦးမန်းဝင်းရဲ့ သမီးဖြစ်သူ ဖေ့ဘုတ်မှာ “အိမ်ထိ ကိုယ်တိုင်လာပြီး ဖေကြီးကိုဆေးဖိုးလှူဒါန်းသွားတဲ့ ညီမလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီ့ထက်မကလှူဒါန်းနိုင်ပြီးအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပါစေ။ညီမလေးအိမ်ကိုလာပြီးညီမလေးပေးမယ့်အဝတ်အစားလေးတွေလာသယ်အူးမျယ်နော် ညီမလေး” ဆိုပြီး ရေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဓာတ်ပုံ – မန်းဝင်းဖေ့ဘုတ် ================== သရုပျဆောငျ သငျဇာဝငျ့ကြျောတဈယောကျကတော့ ဟာသသရုပျဆောငျ ဦးမနျးဝငျးကို ဆေးဖိုးငှအေခြို့ သှားရောကျ ထောကျပံ့လိုကျတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒီအကွောငျး ဦးမနျးဝငျးရဲ့ သမီးဖွဈသူ ဖဘေု့တျမှာ “အိမျထိ ကိုယျတိုငျလာပွီး ဖကွေီးကိုဆေးဖိုးလှူဒါနျးသှားတဲ့ ညီမလေး သငျဇာဝငျ့ကြျောကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ ဒီ့ထကျမကလှူဒါနျးနိုငျပွီးအောငျမွငျမှုတှအေမြားကွီးရပွီးစိတျခမျြးသာကိုယျကနျြးမာပါစေ။ညီမလေးအိမျကိုလာပွီးညီမလေးပေးမယျ့အဝတျအစားလေးတှလောသယျအူးမယျြနျော ညီမလေး” ဆိုပွီး ရေးထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ ဓာတျပုံ – မနျးဝငျးဖဘေု့တျ
ပရိသတ်တွေကြားမှာ ပျံနှံ့နေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ
Comments Off on ပရိသတ်တွေကြားမှာ ပျံနှံ့နေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ
ပရိသတ်တွေကြားမှာ ပျံနှံ့နေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ်သာမက အဆိုတော်တစ်ယောက်အဖြစ်ပါ အောင်မြင် ကျော်ကြားတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းမော်ကွန်းကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို မနားတမ်းရိုက်ကူးနေရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကိုလည်း ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖေါ်ဝါရီလကုန်ပိုင်းလောက်က ဖိုတိုရှုတစ်ခုမှာ ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေကတော့ ပရိသတ်တွေကြားမှာတော်တော်လေး ပျံ့နှံ့နေပါတယ်။ မင်းမော်ကွန်းရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် နုပျိုလွန်းတဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့ ရုပ်ရည်ကြောင့် အရမ်းကို အံ့သြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မင်းမော်ကွန်းရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေကတော့ ပရိသတ်တွေကြားမှာ တော်တော်လေး ပျံ့နှံ့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေကိုတော့ PEOPLE MAGAZINE အတွက် ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် မင်းမော်ကွန်းရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မင်းမော်ကွန်းရဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း သူ့ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို အားပေးလိုက်ပါဦးနော်။ လတ်တလောမှာတော့ မင်းမော်ကွန်းပါဝင်ထားတဲ့ “သားပိုက်ကောင်” ရုပ်ရှင်ကားကြီးကို
ချစ်ဇနီးလေးပေးခဲ့တဲ့ လက်ဆောင်ကြောင့် အရမ်းပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ လင်းလင်း
Comments Off on ချစ်ဇနီးလေးပေးခဲ့တဲ့ လက်ဆောင်ကြောင့် အရမ်းပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ လင်းလင်း
ပရိသတ်တွေကြားရေပန်းစားနေတဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်တို့ရဲ့ ဖခင်ကြီးလင်းလင်းကတော့ ချစ်ဇနီးချစ်သုဝေပေးတဲ့ လက်ဆောင်ကြောင့်ပျော်ရွှင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ရှိုးပွဲတွေကြောင့် မကြာခနခရီးသွားတက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မိသားစုနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာအချိန်လေးတွေကို ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာပေါ်ကပဲ အမြဲဖန်တီးနေတက်သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့က လင်းလင်းရဲ့ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ချစ်ဇနီးလေးပေးတဲ့ လက်ဆောင်လေးနှင့်အတူ အလွမ်းသည်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ လင်းလင်းရဲ့စာသားလေးကတော့ “ကျနော့်မိန်းမက ညည်းခရီးသွားရင်ကျုပ်ကိုသတိရလားဆိုတော့,, ‘ ရတာပေါ့ကွာ ဒါမယ့် ,,ဂစ်တာလေး တစ်လက်လဲပါတယ် ‘ လို့ပြောမိတယ်,, ခရီးထွက်တိုင်း ဒီလိုအမြဲပြောနေတော့ နားငြီးလို့ အဲဒီဂစ်တာလေး ဝယ်ပေးတော့တာပေါ့လေ,,,, သိုင်းကျူး ဟန်နီ” ဟူ၍ ရေးသားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်စရာသမီးလေးတွေနဲ့ အတူ ချစ်ဇနီးလေးကို လိုင်းပေါ်ကပဲ အလွမ်းသည်ခဲ့ရတဲ့ လင်းလင်းရဲ့ ကြည်နူးအပြုံးတွေကို ပရိသတ်တွေလည်းတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ကြိုးစားမှုတွေနဲ့အတူ မိသားစုပြေလည်ရေးအတွက် ဝါသနာကို အရင်းခံကာ ကြိုးစားရုန်းကန်နေတဲ့ လင်းလင်းရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Photos –
ဖေ့ဘုတ်ဆယ်လီ၊ ဟာသသရုပ်ဆောင် ဖြူဖြူထွေးတစ်ယောက်ကတော့ ဟာသဗွီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခု အသစ်တင်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ပိုပိုပြီး သပ်ရပ်အောင် ဖန်တီးလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ *သဝန်တိုတာ ချစ်လို့ပါ အပိုင်း (၁)* ဖြူဖြူထွေးရဲ့ စရိုက် (၅)မျိူး မိခင်တွေဆိုတာ သားသမီးကို ကောင်းစေချင်လို့ပါ ဆိုပြီး ရေးသားကာ ဒီနေ့မနက်မှာပဲ တင်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘီအီးဒီအောင်သိုက် အသံဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို ဖြူဖြူထွေး ၄ ကိုခွဲအဖြစ် ဖန်တီးသရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဗွီဒီယိုဖိုင်အသစ်တွေမလုပ်ဖြစ်တာ ကြာသွားတဲ့ သူမက ခုတော့ လနဲ့ချီအောင် ကြာပြီးမှ အသစ်တစ်ခု တင်ပေးလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အရည်အသွေးကို အဆင့်မြင့်မြင့် အကုန်အကျခံပြီး ဖန်တီးထားတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ သဝန်တိုတာ ချစ်လို့ပါ အပိုင်း (၂)အပိုင်း(၁)ကို ကြည့်ရှု့ရန် 👇 ဖဘေု့တျဆယျလီ၊ ဟာသသရုပျဆောငျ ဖွူဖွူထှေးတဈယောကျကတော့ ဟာသဗှီဒီယိုဖိုငျလေးတဈခု အသဈတငျပေးလိုကျပွီဖွဈပါတယျ။
နှစ်ယောက်အတူတွဲပြီး တွေ့ရတဲ့ နေတိုးနဲ့ ဗီယက်နမ် အလှမယ်လေး ငုရင်ထရန်
Comments Off on နှစ်ယောက်အတူတွဲပြီး တွေ့ရတဲ့ နေတိုးနဲ့ ဗီယက်နမ် အလှမယ်လေး ငုရင်ထရန်
ပရိသတ်တွေတိုင်းချစ်ကြတဲ့ အနုပညာရှင် အကယ်ဒမီ မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နေတိုးနဲ့ ဗီယက်နမ် အလှမယ်လေး ငုရင်ထရန်တို့ကတော့ ဇွန်လ ၉ရက် နေ့က MYTEL ရဲ့ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ အတူတွဲပြီး ဓါတ်ပုံတွေလည်း ရိုက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ နေတိုးကတော့ သူရဲ့ ဖေစ်ဘုတ်ပေါ်မှာ ငုရင်ထရန်နဲ့အတူ တွဲရိုက်ထားတဲ့ MYTEL မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားက ပုံလေးတွေကို တင်ပေးထားပါသေးတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ ချစ်ရတဲ့ အနုပညာရှင်နှစ်ယောက်ကို အတူတွဲတွေ့ရလို့ အရမ်းကို သဘောကျနေကြပါတယ်။ နေတိုးနဲ့ ငုရင်ထရန်တို့ကတော့ “တိမ်တိုက် တံတား” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာလည်း ထွန်းထွန်း၊ ခင်ဝင့်ဝါတို့နဲ့အတူ တွဲဖက်ပြီး သရုပ်ဆောင်ထားပါသေးတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို အားပေးလိုက်ကြပါဦးနော်။ Source: Nay Toe